Kooxdii yarayd ee xalay guuldarrada kala kulantay Tottenham oo shaacisay inay iska diiday inay amaah ku qaadato Mesut Ozil – Gool FM
(London) 11 Jan 2021. Sida wararku ay tilmaamayaan kooxdii yarayd ee xalay guuldarrada weyn kala kulantay Tottenham ee Marine ayaa shaaca ka qaaday inay iska diiday fursad ay kula saxiixan lahayd kubbad abuuraha Arsenal ee Mesut Ozil.
Kooxda Marine waxa ay shaacisay in kubbad sameeyaha reer Jarmal ee Mesut Ozil ay Arsenal u soo bandhigtay inay amaah ku qaadato balse ay iska diiday.
Waxa ay kooxda Marine ka ciyaarta heerka siddeedaad, waxaana ay tartanka FA Cup-ka ciyaartay Tottenham haddii ay reebi lahaydna taariikh ayay sameyn lahayd, laakiin taas bedelkeeda waxa ay guuldarro 5-0 kala kulmeen Spurs, iyadoo saddex ka mid ah goolashaas uu dhaliyey Vinicius.
Kooxdan oo ka dhisan gobolka Merseyside-ka ayaa 161 kooxood oo farqi ah u dhexeeyey iyaga iyo Tottenham, taasoo kuu muujinaysa sida weyn ee ay u hooseyso kooxdan la yiraahdo Marine, yeelkeede maadaama aan la ogoleyn inay taageerayaal badan xaadiraan garoommada haddana kooxdan yar waxa ay lacago badan ka sameysay kulankan 21,000 oo tikidh oo ay iibiyeen.
Taageerayaashan ayaana goostay inay tikidhada goostaan iyagoo xitaa ogaa inaanay ciyaartan daawan doonin, sababtuna waxa ay ahayd inay doonayeen inay kooxdooda ka caawiyaan dhanka dhaqaalaha.
Ka hor inta aysanba ciyaartaasi bilaaban kooxda Marine ayaa shaacisay arrin layaab leh, iyadoo doonaysay inay isku soo jeediso indhaha caalamka, waxaana ay si kaftan ah u shacisay inay Arsenal u soo bandhigtay fursad ay kula saxiixato Mesut Ozil weliba qaab amaah ah, balse ay iyagu iska diideen.
“Warka Kooxda: ‘Jimcihii Arsenal ayaa inoo soo bandhigtay in aannu Ozil ku qaadanno qaab amaah ah, si uu nooga caawiyo inaan garaacno Tottenham, waxaan ka xunnahay nasiib-darro in keydkaya mar horeba la sii qorsheeyey” ayuu u dhignaa qoraal kabtan ah oo ay kooxdan yar ku soo qortay barteeda Twitter-ka.
Timo Werner oo ugu dambeyn soo gabagabeeyey gooldhalin la’aantiisii kaddib markii uu maanta shabaqa ka soo taabtay Morecambe